Kedu mgbe Xiaomi ga-enwe gam akporo 7? | Gam akporosis
Kedu mgbe Xiaomi ga-enwe gam akporo 7?
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Gam akporo nsụgharị, Xiaomi
Anyị abanyelarị na ọnwa nke abụọ nke afọ 2017. Ma enwere ọtụtụ ndị ọrụ Xiaomi ndị na-eche mgbe ekwentị ha ga-enweta mmelite a na-eche ogologo oge. Dị ka ọ dị na mbụ, onye ọrụ gam akporo ọ bụla chọrọ ịnwe ụdị nke sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ. Mana ọ dị ka Xiaomi na-arịọ arịrịọ karịa ka atụrụ anya.
1 Ndị ọrụ Xiaomi na-echere mmelite gị.
2 A ga-akpọ gam akporo 7 Nougat MIUI 9.
Ndị ọrụ Xiaomi na-echere mmelite gị.
Ọ bụ ihe nkịtị na mmelite Xiaomi so na ndị kachasị atụ anya. Ọ bụghị n'efu Chinesedị ndị China dị iche iche bụ otu n'ime ndị toworo eto na mba anyị n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ndị Refeyim dị elu nke Samsung maara banyere asọmpi na-agbasiwanye ike nke ụdị ndị a. Ugbua na njedebe nke afọ gara aga anyị nwere ohere ịnweta a ndepụta nke ụdị Xiaomi nke ga-enwe ike ịnweta mmelite n'ọdịnihu.
Ọ bụrụ n’inwere otu n’ime ekwentị ndị a ma ị maghị ma ọ bụrụ na ekwentị gị ga-enweta mmelite ahụ, anyị ga-echetara gị ndị a ga-ahọrọ. Dị ka atụ anya, Smartphones ndị kachasị ike ga - enwe nchedo nke gam akporo gam akporo Nougat. Ya mere ụdị ndị ahụ Xiaomi Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Note 2, Mi 5, Mi 4, na Mi Max, na Mi MIX ụdị.
Echegbula ma ọ bụrụ na Xiaomi gị esoghị na ndị ahụ elere anya dị ka ndị dị elu. Ahịa ndị China ga-akwadokwa ekwentị etiti. Dịka atụ anya ya, a ga-emelitekwa ekwentị ndị jisiri ike tinye Xiaomi na eserese ngosi. Ya mere kwa ama 'Redmi' akara ga-ejidekwa. Ha ga-abụ Xiaomi Redmi 4, Redmi 3, Redmi Rịba ama 4, Redmi Rịba ama 3, Redmi Pro na Redmi 4A.
A ga-akpọ gam akporo 7 Nougat MIUI 9.
Ọ bụghị ihe ijuanya n'etiti ndị ahọpụtara kemgbe ndị nke fọdụrụ bụ ekwentị ndị dị n'ahịa kemgbe ogologo oge. A na-ahụta ha dị ka ndị nwere ike dochie anya iji zuru oke. Ogologo oge ole ka ha ga-echere ka ha nweta ụdị ọhụụ nke gam akporo?
Dị ka anyị si mara, Xiaomi nwere akwa nke nhazi nke nwere ezigbo aha. MIUI na-ekwu na ọ bụ otu n'ime usoro kachasị mma nke nhazi nke sistemụ arụmọrụ Google. Na ọdịdị na ọdịdị nke ọtụtụ mmadụ MIUI na-enwe mmeri n'etiti ndị ọrụ ya. Anyị amatakwala nke ahụ mbipute nke sistemụ arụmọrụ dabere na gam akporo 7 ga-abụ MIUI 9.
Anyị nwere ozi na ụdị "kwalite" Anyị makwaara ihe a ga-akpọ oyi akwa nhazi. Naanị anyị kwesịrị ịma mgbe ụbọchị a ga-ahọrọ site na akara Asia iji bido melite ya ozugbo. Ma n'ezie, mgbe nke a mere site na Androidsis anyị ga-agwa gị otu o si arụ ọrụ na ihe anyị chere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Kedu mgbe Xiaomi ga-enwe gam akporo 7?
Ee .. Ha na-ekwu okwu banyere Android «O» na Xiaomi ka nọ «M» ... Ka anyị hụ ma ha mee ọsọ ọsọ haha
Yelp weputara ohuru iji choo ozi banyere udiri azumahia obula
Google Play Movies mmelite na ọnọdụ gbara ọchịchịrị